Weerarka ku tiirsanaanta ayaa u oggolaanaya fulinta koodhka PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber iyo 30 shirkado kale | Laga soo bilaabo Linux
Maalmo ka hor hab la yaab leh oo fudud ayaa la sii daayay oo u oggolaanaya weerarka ku tiirsanaanta codsiyada kuwaas oo lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo keydadka xirmooyinka gudaha. Baarayaasha aqoonsaday dhibaatada waxay awoodeen inay socodsiiyaan lambarkaaga on server-yada gudaha ee shirkadaha 35, oo ay ku jiraan PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber, Tesla, iyo Shopify.
Jabsashada waxaa loo fuliyay qeyb ka mid ah barnaamijyada Bug Bounty, iyadoo lala kaashanayo shirkadaha la weeraray, dambiilayaashana waxay durbaba heleen $ 130.000 oo gunno ah oo lagu aqoonsanayo dayacaadka.
Habka wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah in shirkado badan ayaa adeegsada ku-tiirsanaanta kaydka NPM, PyPI iyo RubyGems barnaamijyadooda gudaha, iyo sidoo kale ku-tiirsanaanta gudaha ee aan si guud loo qaybin ama looga soo dejin bakhaarradooda.
Dhibaatadu waxay tahay maareeyayaasha xirmooyinka sida npm, pip iyo jawharad waxay isku dayaan inay kala soo baxaan waxyaabaha ay ku tiirsan yihiin shirkadaha, xitaa meelaha ay ka keydsan yihiin dadweynaha. Weerar ahaan, kaliya ku qeex magacyada xirmooyinka iskuduwaha gudaha kuna abuuro baakado kuu gaar ah isla magacyo isku mid ah keydadka dadweynaha ee NPM, PyPI iyo RubyGems.
Dhibaatadu kuma koobna NPM, PyPI, iyo RubyGems, waxayna sidoo kale muujineysaa nidaamyo kale sida NuGet, Maven, iyo Yarn.
Markaad soo dejineysid ku-tiirsanaanta, maareeyayaasha xirmooyinka npm, pip, iyo jawharad badanaa waxay ku rakibnaayeen xirmooyin ka yimid bakhaarrada aasaasiga ah ee dadweynaha NPM, PyPI, iyo RubyGems, kuwaas oo loo tixgeliyey mudnaan sare.
Jiritaanka baakado isku mid ah oo isla magacyo ku leh bakhaarrada shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa la iska indhatiray iyada oo aan la tusin wax digniin ah ama aan keenin shilal taasi oo soo jiidan karta dareenka maamulayaasha. PyPI, mudnaanta soo dejinta waxaa saameyn ku yeeshay nambarka nooca (iyadoon loo eegin keydka, nooca ugu dambeeyay ee xirmada ayaa la soo dejiyey). NPM iyo RubyGems, mudnaanta ayaa kaliya ku tiirsanayd keydinta.
Cilmi-baaraha ayaa xirmooyinka ku meeleeyay bakhaarrada NPM, PyPI, iyo RubyGems kuwaas oo isku xiraya magacyada ku-tiirsanaanta gudaha laga helay, iyagoo ku daraya koodh qoraal ah oo soconaya ka hor inta aan la rakibin (horay loogu sii rakibay NPM) si loo ururiyo macluumaadka ku saabsan nidaamka loona gudbiyo macluumaadka helay martigaliyaha dibadda.
Si aad u gudbiso macluumaadka ku saabsan guusha jabsiga, iskabax dab-damisyada xannibaya taraafikada dibadda, habka loo abaabulo isgaarsiinta kanaalka qarsoodiga ah ee borotokoolka DNS. Koodhkii shaqeynayay ayaa xaliyay martida loo yaqaan 'domain weerarka' ee hoos yimaada xukunka weerarka, taas oo suurtagelisay in lagu soo ururiyo macluumaadka ku saabsan hawlgallada guuleysta ee server-ka DNS. Macluumaadka ku saabsan martigeliyaha, magaca isticmaalaha iyo dariiqa hadda la marayo ayaa la maray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Weerarka ku tiirsanaanta wuxuu u oggolaanayaa fulinta koodhka PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber iyo 30 shirkado kale